Ọ bụrụ na ị nwere Galaxy S10 ị gaghị enwe ike ịkwụsị oku vidiyo na Snapchat | Gam akporosis
Broken oku vidiyo na Snapchat mgbe ejiri ya na ekwentị
Enwererịrị ọtụtụ ndị ọrụ na-ahụ oku vidiyo agbajiri agbaji na ngwa Snapchat na ekwentị ha nwere oghere na ihuenyo dị n'akụkụ aka nri. Nke ahụ bụ, ekwentị Samsung ndị ahụ, dị ka Galaxy S10, enweghị atụmatụ ọkpụkpọ vidiyo dị na Snapchat.
Ma ọ bụ ezie na anyị na-eche ihu na ngwa na adịghị amasị ndị ọrụ nwere ekwentị gam akporo ma ọlị, eziokwu bu na o ji ya nde mmadu gburugburu uwa; ọ bụ ezie na ọ dị na mpaghara ma mba ọtụtụ mba anaghị eji ya dị ka ọ na-eme n'akụkụ ndị a.
Anyị amaworị ụdị ọhụrụ nke E degharịrị Snapchat site na ncha, ma ugbu a, ihe anyị maara bụ na ndị ọrụ na igwe nwere oghere na ihuenyo dị n'akụkụ aka nri, oku vidiyo enweghị ike ịkwụnye ka bọtịnụ "oku nkwụsị" dị n'akụkụ aka nke mobile.
Ohere ọ bụla nke foto na vidiyo ọsọ ọsọ na-egosi ekwentị mgbe ọ mere?
- Artem Russakovskii (@ArtemR) Nwere ike 5, 2019
Ihe na-atọ ọchị bụ na bọtịnụ "oku ikpeazụ" ekpuchighi n'uju na nkwụsị ahụ na ihuenyo nke Galaxy S10 +; ebe a bụ usoro kachasị mma maka nnukwu ekwentị Samsung. Kedu nke na-anaghị egbochi nke ahụ, mgbe ọtụtụ mbọ gasịrị, anyị nwere ike mechaa kpọọ oku ahụ, ọ bụ ezie na ahụmịhe onye ọrụ na-ata ahụhụ dị ukwuu na ekwentị ndị a na Snapchat.
Nsogbu a dịkwa nchebe ihe ndi ozo nke S10 nwere ya Dị ka ọkọlọtọ, S10e na S10 5G nwere otu nkwụsị ahụ na ihuenyo ahụ nke mere ka Samsung kọwaa dị ka otu n'ime mbibi kachasị na mmalite na teknụzụ.
Ugbu a na olile anya Snapchat banye na ya ma mee ka ngwa nke ngwa gị dị nke mere na ndị ọrụ ahụ nke Galaxy S10 nwere ike ịnwe ahụmịhe nkịtị dịka ndị ọzọ nwere ike ịnwe site na mobiles ha. A Snapchat nke na - eme ka anyị nwee nsogbu mgbe niile na ahụmịhe ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Broken oku vidiyo na Snapchat mgbe ejiri ya na ekwentị
Gbaa ịnyịnya dainoso gị na Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Ọrụ zuru ezu n'ịntanetị
Osisi 3D Foto dị egwu !!